Intee in le'eg ayaan ku kharashgareynayaa adeegga SEO-ga la bixiyo?
Waxaa jira laba su'aalood oo badanaa la isweydiiyo "Imisa ayey bixiyaan khidmadaha SEO-ga?" Iyo "Mudo intee le'eg ayay qaadanaysaa in la ilaaliyo natiijooyinka ugu horreeya ee SEO?" Haddii dadku ka fekeraan, tanu maahan sabab wanaagsan. Ma aha hawl fudud oo lagu qiimeeyo saadaalinta raadinta raadinta maaddaama kharashka ugu dambeeya ee adeegyada SEO bixiya ay ku xiran tahay tirada sababaha. Kharashka SEO wuxuu sidoo kale si toos ah ula xiriiraa abaalmarinta suurtagalka ah, iyo warshadaha aad jeceshahay inaad ku dhiirrigeliso ganacsigaaga. Qiimaha adeegga SEO-ga ee lacagta la bixiyaa way kala duwanaan karaan, sababtoo ah baaxadda wacyigelinta (caalami, dawlad, waddan, magaalo, magaalo ama goobo yaryar). Arrintani, dabcan, waxay saamayn ku yeelan doontaa qiimaha SEO ee xaaladdaada gaarka ah.
Maanta, waxaan jeclaan lahaa in aan eego faa'iidooyinka raadinta bani'aadamka iyada oo la adeegsanayo farsamaynta raadinta si ay u bixiso sharrax cad oo la xidhiidha "Imisa kharashka adeegyada SEO?" Haddii aad hogaaminayso shirkad weyn ama ganacsi maxaliga ah, tilmaan-bixiyahan ayaa kaa caawin doona inaad ogaato waxa maalgashigaagu u egyahay raadinta dabiiciga ah.
Maxay asxaab u yihiin inay qiimeeyaan kharashka adeegga SEO-ga?
Waxaa jira saddex doorsoomayaal asaasi ah oo aad u baahan tahay inaad tixgeliso inta aad go'aamineyso qiimaha SEO. Ugu horreyntii, waa xaalad (xaggee ayaad juquraafi ahaan ku salaysan tahay), ujeedooyinka (maxay yihiin hadafyada ganacsigaaga?) Iyo waqtigeeda (sida ugu dhakhsaha badan ee aad rabto inaad horumar u hesho?). Dhamaan hay'adaha SEO waxay tixgeliyaan qodobadaas iyagoo xisaabinaya inta adeeg ee SEO ah ee ay tahay in ay ku kacdo ganacsigaaga. Waxaa loola jeedaa in la falanqeeyo xaaladda hadda macmiilka, fahmida ujeedooyinka ganacsiga iyo go'aaminta jadwalka loo baahan yahay, shirkad raadin mashiinka raadinta ayaa xisaabin karta qiimaha. Waxaa intaa dheer, niche sicirku wuxuu qeexayaa kharashka adeegyada SEO bixisay. Haddii aad kasbato wax ka badan $ 200 oo heshiis lagula galo hogaanka cusub, waxaad filan kartaa inaad bixiso wax ka yar haddii macaamilkaaga macquul ah uu u dhigmo kun doolar. Maaddaama khabiiro SEO ah ay ka fakaraan in ay ku soo noqdaan maalgashiga, niche suuq ayaa kuu xakamaynaya qiimaha ilaa heerkaas. Qiimuhu wuxuu noqon karaa mid sareeya haddii hay'ad SEO ah oo la qorsheynayo istaraatejiyad istiraatiijiyadeed oo la xidhiidha xaaladda gaarka ah iyo ujeedooyinka gaarka ah ee ganacsiga.
Kharashaadka caadiga ah ee adeegyada bixiya SEO
Si laguu caawiyo qorshaynta qorsheyntaada, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid intaad u baahan tahay inaad ku qaadato adeegyada adeegsashada. Halkan waxaa ah sahan ku saabsan qiimaha kharashka sida waafaqsan seddexda nooc ee lacag bixinta aasaasiga ah (bil kasta / heshiis / mashruuc ku salaysan).
Kharashka adeegaha SEO
Adeegyada sii-haynta bishii ayaa qiyaastii $ 750 ilaa $ 5,000 bishii. Halkan kharashka adeega wax-ku-oolnimada waxay ku xiran tahay xajmiga baahida ganacsiga iyo inta adeegyada ay bixiso hay'adda SEO. Shirkadaha yar yar ee SEO-yada oo bixiya xaddi xaddidan oo ah adeeg-yada wax-qabadka waxay leeyihiin sicirro qiimo jaban oo ka badan hay'adaha dijitaalka oo buuxa. Ganacsiyada intooda badan waxay bixiyaan inta u dhaxaysa $ 2,000 ilaa $ 5,000 adeeg kasta oo SEO ah.
Qiimaha qandaraaska ee lagu bixiyo kharashka adeegyada SEO
. Websiyada dhawaan la bilaabay iyo dadka cusub ee suuq-geynta suuq-geynta ayaa dooranaya adeegyada qandaraaska SEO-ga sidii xarun soo gasho. Adeegyada noocan ahi waxay bixiyaan milkiilayaasha bogagga leh farsamooyinka wax-qabadka aasaasiga ah, falanqaynta, iyo taageerada joogtada ah. Adeegyada qandaraasyada SEO ah waxaa loo qaybin karaa adeegyada suuq-geynta macaamiisha (ilaa $ 0,50 kelmado), adeegyo xisaabin ($ 500 ilaa $ 8,000 mashruuc), xisaab xirida xiriirka ($ 500 ilaa $ 7,500 mashruuc), iyo adeegyada SMM ($ 500- $ 3,500). Qiimaha noocan oo kale ah oo SEO ah wuxuu ku xiran yahay isku dhafnaanta ( mashruuc iyo xaaladda xaadirka ee hadda. Haddii mashruuc gaar ah u baahan yahay waayo-aragnimo khaas ah iyo software-yada wax-qabadka, qiimaha sicirka ee adeegga SEO-ga ee lacagta loo kordhiyo ugu yaraan 15%. Mashruucyada badankoodu waxay ku kacayaan $ 1,000 ilaa $ 30,000.
Qiyaasta saacadaha saacadaha saacadaha ah
Adeegyada talobixinta saacadaha SEO ah ee laga bilaabo $ 50 ilaa $ 300 saacaddii Source .